ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် koreaရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ တွေ့ဆုံပွဲ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် koreaရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ တွေ့ဆုံပွဲ
နှစ်ခေါ်အာ နှစ်ခါအော် ဒီလင့်လေးကို လာခဲ့နော် ကိုရီးယားမှာအဖော်ပြု ဒို့ လိုချင်တာ မေမေစု ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ တွေ့ဆုံပွဲကို အင်တာနက်မှ တိုက်ရိုက် လွှင့်တင်ပါမယ်။ အောက်ပါ လင့်မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကိုရီးယား အချိန် နံနက် ၉း၃၀ (GMT 00:30) မြန်မာ အချိန် နံနက် ၇း၀၀ http://www.ustream.tv/channel/dassk-korea DASSK-Korea www.ustream.tv DASSK-Korea @ USTREAM: Daw Aung San Suu Kyi speech to Burmese people in Korea. 2013 Feb 1, Seoul. Breaking News http://www.ustream.tv/channel/dassk-korea ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ http://tunwai-states.blogspot.jp/မှာလည်း လာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ကဏ္ဍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ တွေ့ဆုံပွဲ